Ndingawuthenge phi iHorm Growth Hormone e-US yaseMelika
yiHGH Thailand Februwari 17, 2019
1. Ndingafumana phi i-hormone yokukhula komntu e-US?
2. Ukuthandwa kwe-hormone yokukhula e-US
3. Iinjongo zokuphuhlisa imarike yokuthengisa yeHGH
4. Ukwanda kweMfuno yoLuntu lokuHluma kweHori e-USA
5. HGH - Eyaziwayo kunye nabasemagunyeni kunye nama-superstars
6. Njani kunye nendawo yokuthenga iHGH e-US
7. Ukusetyenziswa kwe-HGH e-USA ukukhula kwemisipha kunye nokwakha umzimba
8. Ixabiso leHGH e-US
9. Ukusemthethweni kwe-hormone yokukhula e-US
10. Ukunciphisa i-GH e-USA
11. Unyango lokuguga kunye neHGH
12. HGH Thailand - ukuthunyelwa ngqo kweHGH ukusuka eThailand ukuya e-USA
Ndingafumana phi i-hormone yokukhula komntu e-US?
Iingcamango zokuthintela ukuguga kunye nokuvuselelwa kwaphazamisa iingqondo zabantu ngaso sonke ixesha. Kodwa kwakunokwenzeka ukuyiqonda, nangona kunjalo, kuphela kwixesha lethu lobuchwepheshe obuphezulu. Ngaphezu koko, akukho zicwangciso zezobuchwepheshe ezizodwa ezifunekayo.
IHormone yokuHlaba kwabantu, eyaziwa nangokuthi yi-HGH, evumela ukuba ufezekise into efunwayo, iveliswa yi-pituitary gland ngobuninzi. Kwaye konke okufuneka kwenziwe ukwenzela ukuyeka ukuguga kukubuyisela izinga, elidlulileyo le minyaka liye lahla kakhulu.
Ukuthandwa kwe-hormone yokukhula e-US
E-United States, le hormone yayisasazeka iminyaka elishumi edlulileyo. Ngoku iNameric ijongene nokuxhamla kwangempela, ifuna ukuvuselela ngokukhululeka, okanye ubuncinci ukulibala ixesha xa ukuguga kuya kuqala ukukhonkqoza emnyango. Ngokusebenza kwe-HGH kuthetha iziphumo ezintle ezibonakalayo njengabantu abaziwa ngokuqhelekileyo kunye nabantu abaqhelekileyo.
Ukuguqulwa kwonyango kusetyenziswe ngempumelelo kwiyeza lokulwa nokuguga iminyaka emininzi kwaye ivelisa iziqhamo. Ukongezelela, i-hormone yokukhula isasazeka kwibala lemidlalo. Umlandeli wokusetyenziswa kwayo, umzekelo, umbhali wokuthengisa ngokuthe tye "Isicwangciso soBomi" uDkt Life ngubani ngo-73 ubheka i-40.
Kutheni kufuneka unyango olufunekayo lwentlawulo? Kule minyaka, ukuveliswa kweHGH nge-pituitary gland kuncitshiswa kakhulu. Le nyaniso ibangela inkqubo yokuguga ngokukhawuleza. Kulapha ukuba i-hormone yokukhula ifika ekuhlanguleni, ebonisa umphumo omuhle emzimbeni:
- khuthaza ukukhula ngokukhawuleza kobunzima bomzimba. Ngokuqinisekileyo, kule njongo kuyimfuneko ukukholisa impilo efanelekileyo;
- isusa amaninzi omzimba, ukuze i-hormone isetyenziswe ngempumelelo ekulahlekeni kwesisindo;
- iqala inkqubo yokuhlaziywa kwezitho eziye zayeka ukusebenza ngenxa ye-atrophy ehlobene neminyaka;
- kubuyiselwa kwaye kuphuculwe kakhulu ubuchule;
- ubeka umyalelo wemisebenzi yokukhusela yomzimba.
Ngaphandle kwemisebenzi yomzimba, i-hormone iyayeka, okanye ikhusele ngokupheleleyo inkqubo yokutshatyalaliswa kwemizimba kunye nezitho zangaphakathi, ngokunciphisa ukuguga komzimba.
Iinjongo zokuphuhlisa imarike yokuthengisa yeHGH
Iimpembelelo ezinjalo zeHGH zazingenakukwazi ukungazi. Ngako oko, imfuno yeHymmone yokukhula kwe-Human hhayi kuphela e-USA, kodwa nangaphezulu kwemida yelizwe, iyanda. Singaqiniseka ngokuqinisekileyo ukuba kwiimfuno ezizayo ziya kuphakama.
Kukugqithiswa ngokukhawuleza okuya kuba yinto ebungqina bempumelelo yeHGH. Sekude kusetshenziswe ngempumelelo ngabagijimi ngokukhula kobutyebi bomzimba, kodwa kwiminyaka yamuva abantu abaninzi banomdla kumandla abo okuvuselela nokukhusela ukuguga.
Imfuno ephezulu ikhulisa kakhulu iindleko zehomoni. Le nyaniso kufuneka ithathelwe ingqalelo xa isigqibo malunga nokuthengwa nokusetyenziswa kwe-HGH. Emva kweminyaka embalwa, ixabiso layo liyakwazi ukuphakama kwiindawo eziphambili kunye ne "injection yobutsha" kuya kuba nzima ukufikelela kubantu abanokuthenga.
Ukwanda kweMfuno yoLuntu lokuHluma kweHori e-USA
Ukuqala kokukhankanywa kwe-HGH kwavela kwii-60 ezikude zekhulu elidlulileyo, kodwa kwafumana ukuthandwa ngokwenene kuphela ekuqaleni kwe-90s. Izifundo eziye zityhila iingenelo ezingenakuphikiswa kokusetyenziswa kwayo, kunye nemimiselo ephilayo yabantu abaphumelele ukufumana iziphumo ezilungileyo ekubuyiseleni uhlobo olumangalisayo lwemidlalo nasekumisekeni inkqubo yokuguga, bebangela ukuba i-hormone yokukhula yabantu iqhube.
Namhlanje, ukufunwa kuye kwandise amawaka ngamakhulu, kodwa oku kuncipha elwandle xa kuthelekiswa noko ihlabathi likulindele kwixesha elizayo. Umxholo womzimba omhle, omncinci, otyumkileyo kunye nompompo ophakanyisiwe kuwo wonke amaphephandaba, amanxibelelwano enzentlalo, iincwadi kunye namaphephancwadi. Abantu bahlala bekhangela iifom zokufumana iifom ezifunwayo, bahlala kwiidlo, abomisi, bachithe iiyure kwiimigodi, kwaye bahlale befezekisa injongo.
Ukuqonda ukuba ngaphandle kokusondeza ngaphakathi, akusayi kubakho mphumo, abagijimi, abakhi bomzimba, abafazi abakhangela ukubonakala kwabo, amadoda angafuni ukuguga, khetha i-hormone yokukhula kwabantu.
Ngokweziganeko ezithobekileyo, iHGH iya kutshatyalaliswa ngokukhawuleza onke amanqaku anokwenzeka kwaye angenakwenzeka ekuthandeni.
Kwaye oku kunengqiqo, kuba i-hormone ayifuni ukuzenza utshintsho olusisiseko kwimpilo yakho. Ngoku awudingi ukuzityhafisa ngesidlo kwaye ungaphumeli kwisihlalo sokugungqa ukufezekisa ukwanda kwimizimba ye-muscle kwaye uqale ukuhlaziywa kwamaseli atrophied. Unelungelo lokuthatha i-GR kunye nenjongo ifumaneka.
HGH - Eyaziwayo kunye nabasemagunyeni kunye nama-superstars
Kwimidiya, kukho iingxelo ezingaphezulu nangaphezulu ukuba abantu abadumileyo bathatha iHymmone yokukhula kwabantu ukuxazulula nayiphi na ingxaki ebonakalayo ngobudala. Ngokomzekelo, uJeffrey Life, ukhankanywe ngentla, ngexesha elithile eligqibeleleyo wanquma ukutshintsha ngokwakhe, ukubuyela kulutsha kwaye uphumelele.
Kwaye kwincwadi yakhe "Isicwangciso soBomi"Ubhala ngobuninzi malunga ne-alternative substitution, evumela ukuba kubuyiselwe izinga lokukhula kwehomoni. Ngaphandle kwakhe, akayi kuphumelela, nangona usebenza ngokukhatyayo kwindawo yokuzivocavoca kunye nokutya okungqongqo.
Omnye udumo waseMerika, Alan Stewart, uchaza amava akhe ngeHGH ngokubanzi.
Waqala ukuthatha i-hormone yokukhula koBuntu ukulahla iinwele ezimnyama, kodwa umphumo wokusetyenziswa rhoqo wawunamandla kakhulu. Umdlali weqonga odumile wayevuyiswa kukuba ngoku amandla akhe ngoku, umzimba wakhe uphumelele kakhulu.
Umculi we pop URobbie Williams, ophumelele ukusebenzisa i-HGH ukwandisa umnqweno wesini kunye nokudibanisa ubomi obusondeleyo, wabelane ngokubonakala kwakhe malunga ne-hormone yokudla kwiminyaka eyahlukeneyo, kwaye Demi Moore, umdlali wezemidlalo kunye nomdlali Jane Fonda, sisengumlinganiselo wobutsha kunye nobuhle besifazana obuxhasa isalathisi sakhe, nangona ubudala bakhe.
Njengoko ubona, i-hormone yokukhula yabantu ichaphazela yonke into, okwenza ukuba ibe yinto enhle kuphela, kodwa inamandla. Ukuthatha i-HGH, umntu uzizwa eselula kwaye ethembele ngakumbi.
Njani kunye nendawo yokuthenga iHGH e-US
Ukuthenga i-hormone yokukhula e-United States inokusemthethweni kuphela ngomyalelo. Kwaye oku kufuneka ube nesizathu esihle sokufumana le nkunkuma. Ukuba ugqirha uye wakubeka le mpendulo kuwe, uya kuhlangana nesinye inkinga - indleko ephezulu yoHlmone yokukhula kwabantu.
Ngoko ke kunengqiqo ukuba inani elinyukayo lamaMerika liyala iHGH eThailand. IHGH iThailand iyithengisa kakhulu. Kwaye le mali ufumana i-hormone yokukhula efanayo, ibonisa umphumo ofanayo.
Indlela yokuthenga i-hormone yokukhula eThailand? Kulula kakhulu!
Ukwenza oku, vele uzalise ifowuni yesicelo kwaye ulinde ifowuni evela kumphathi ukucacisa zonke iinkcukacha. Emva koko, ukuhanjiswa kunoma iyiphi nayiphi na iplanethi, eya kuthatha ubuncinci bexesha, iya kulungiswa.
Sinika ithuba lokuya kwi-Thailand HGH ngexabiso elithengileyo, elithengwa ngabathengi abanakho naziphi na iimali. Ukuthenga i-hormone yokukhula kwiwebhsayithi yethu, akudingeki ukuba ube udumo, ube nemali enkulu. E-US, abantu ababutyebi kuphela abanokukufumana.
Ukusetyenziswa kwe-HGH e-USA ukukhula kwemisipha kunye nokwakha umzimba
Okwangoku, e-United States ukuba ukuthandwa kwe-hormone yokukhula kubetha zonke iintlobo zeerekodi ngokubhekiselele ekuthengiseni. Ngokuqhelekileyo isetyenziswe kwintsimi yezemidlalo ukufezekisa ezi njongo:
iiprotheni zangaphakathi kwiisculi kunye neeseli, ngenxa yinto etshabalalisiweyo okanye ehlanjululwayo imisipha ibuyiselwa;
- ukwanda kwamandla omzimba;
ukuqiniswa kweethambo zethambo, ngenxa yokuphumelela kwayo
- ukwandisa ukusebenza koqeqesho lwezemidlalo;
- ukugcina imeko epheleleyo ye-cardiovascular system kunye neentso;
- ukukhula kwemisipha.
Siyabulela kuluhlu lokugqibela, i-hormone isetyenziswe ngabakhi bomzimba abaninzi abaziwayo. Ngokweziqinisekiso zabo, kunika umphumo omkhulu we-anabolic kunezilwanyana ezisetyenziswa ngaphambili.
Ixabiso leHGH e-US
Njengoko sele kuthethwe ngazo, ukufuna okuphezulu kubangela ukunyuka rhoqo kwiindleko zeHymmone yokukhula kwabantu eMelika, ngoko ukufunyanwa kweHGH eThailand kuba yinto efanelekileyo. Ngaphezu koko, ukufumana imveliso akudingeki ukuba uye naphi na okanye uya khona - unokwenza umyalelo okwangoku. Unokungazi kakuhle uluhlu lwamanani kwicandelo elifanelekileyo lethu Website.
Ukusemthethweni kwe-hormone yokukhula e-US
Phakathi kweenzuzo zokuthenga i-HGH e-USA ngumthetho wemveliso kulo lonke ilizwe. Ewe, inokuthengwa eMelika phantse nayiphi na ikhemisi, kodwa ngokuqinisekileyo oku kuya kufuna imithi evela kumgqirha oya kuzo. Ukuphendukela kwiHGH yaseThailand, awuyi kuhlangabezana nale ngxaki.
Isigulana sesilwanyana siya kugqitywa ngugqirha eBangkok, kwaye uya kufumana ngokukhawuleza iHymmone yokukhula kwabantu.
Inkampani yethu inikeza enye into efanelekileyo-yolawulo i-HGH eThailand kwi-intanethi. Ixabiso layo liphantsi kakhulu apha kwaye akukho maxwebhu angeziweyo ayadingeka ukuthenga.
Ukunciphisa iHGH e-USA
Enye yeenjongo apho iHymmone yokukhula kwabantu isetyenziswe ngokuthe ngqo kwi-United States kukuba ilahle iipounds. Ukusebenza kwale ndlela kuphezulu kakhulu. Into yokuba, ngokungafani nezinye iziyobisi kunye neendlela, i-HGH izakhela ngokuthe ngqo kwiiseli zomzimba, isuse amafutha e-fatty, ibuyisele i-oksijini eyimfuneko yokuvuselelwa.
Ngenxa yolu, inani lamatye e-mafutha liyancitshiswa kakhulu, elikhokelela ekulahlekelweni kokunciphisa umzimba. Ngexesha elifanayo, i-hormone ayifuni ukukhubaza ingxaki enkulu kwaye ayiyi kudala nayiphina imiphumo. Ufumana ithuba lokwenene lokulawula ubunzima bakho ngaphandle kokutya okutyayo kwaye uthathe amayeza ahlukeneyo, ukuphumelela okuyiyo.
Unyango lokuguga kunye neHGH
Enye injongo ekujoliswe kuyo i-HGH Thailand itholakala ekunciphiseni ukuguga. Impembelelo efunwayo ifumaneka ngenxa yeendlela ezilandelayo zeHGH:
i-skin hydration esebenzayo kunye nokwanda kancinci kobunzima bayo;
- ukwandisa uxinzelelo lweethambo;
Ukubuyiselwa komsebenzi oqhelekileyo wenhliziyo kunye nenkqubo yokuphefumula;
- ukunciphisa okukhulu kwe-cholesterol, echaphazela kakubi ukusetyenziswa kwazo zonke iisistim zomzimba;
- ukuphucula kunye nokukhula kobunzima bemisipha, ukuthintela ukutshatyalaliswa kwemisipha engabandakanyeka ngenxa yokuphila ngokuhlala;
- ukuphucula ukuphucula;
- ukupheliswa kweengxaki zombono.
I-HGH inefuthe elihle kwimigangatho yengqondo, yenza kube lula ukuva uxinzelelo, kuphucula imizwelo kwaye kunciphisa uxinzelelo. Ngenxa yoko, ixesha lokuphila landa, kwaye ukuguga kunciphisa kakhulu.
HGH Thailand - ukuthunyelwa ngqo kweHGH ukusuka eThailand ukuya e-USA
Iminyaka emininzi uye wayidla kunye nokutyelela i-salon beauty salons, kodwa ngaphezu kweminyaka iyanzima ngakumbi ukugcina isimo esifanelekileyo? Sinikela ngenye indlela efanelekileyo nefanelekileyo-ukukhula kwehomoni, eye yabonisa ngokuphindaphindiweyo kwaye iyaqhubeka ibonisa ubungqina bayo.
Imizekelo yabangqina bamele bonke abantu, ngoko niqinisekisa ukuba iHGH iyona ndlela eyona ndlela iyona ndlela ibhetele yokunciphisa ukuguga, ukuphucula ukusebenza kwezemidlalo kunye nokulahlekelwa isisindo akunzima.
Ngaba ufuna ukufumana imiphumo yale mveliso? Akukho mfuneko yokukhangela iindlela zokufumana imithi e-USA kwaye uthenge i-hormone yokukhula yabantu kwixabiso eliphezulu.
Myalelo kwi-HGH Thailand ngaphandle kokushiya ikhaya lakho kunye neendleko ezaneleyo. Siqinisekisa isiqalo kunye nomgangatho weempahla, sinika ithuba lokuyilungisa kwi-intanethi ngokunikezelwa kunoma yimuphi ummandla. Ixesha lokuthumela ukusuka kwi-4 ukuya kwii-7 iintsuku nge-Thailand Post okanye ukusuka kwi-1 ukuya kwii-3 iintsuku ngeendleko ezongezelelweyo.
Imihla echanekileyo ixhomekeke kwindawo yakho, kodwa akukho ngaphezu kweveki kamva ungaqalisa inkqubo yokwenza unyango ngokuguga.
Thenga i-HGH e-US-Ukuthumela eMelika
Umthengisi weHGH eSingapore
HGH Malaysia - Thenga iHormone yokuHlalisa abantu eMalaysia